Channel5(UK) - ဝီကီပီးဒီးယား
ချန်နယ် ၅ သည်ဗိပွားဖြစ်ရုပ်သံလွှင့်ကွန်ယက်ကို။ လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ တွင်၊နှင့်ပဉ္စမမြောက်အမျိုးသားကုန်းလာ့ဂ္နာကွန်ယက်တွင်အ မေရိကန်နိုင်ငံ ပြီးနောက် ဘီဘီစီတစ်ခုမှာ၊ ဘီဘီစီနှစ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊နှင့် ရုပ်သံလိုင်း ၄။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ပဉ်စမ-ထားကွန်ယက်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ပရိတ်သတ်မျှဝေခဲ့ပြီး၊ယခုတိုင္။
၃၀ မတ် ၁၉၉၇; ၂၂ နှစ် အကြာက (၁၉၉၇-၀၃-30)
(မတ် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၃), BARB)
အနမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ငါး များအကြား ၂၀၀၂ နှင့် ၂၀၁၁ အခါကအ ညာစု။ ရစ်ချတ်မြန္တူး ဝယ်ယူဘူတာရုံကနေညာအပေါ် ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၀၊ကြေညာရန်စီစဉ်ထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပိုက်ဆံအတွက်နှင့်ပြန်လာရန်အမည်ရုပ်သံလိုင်း ၅ နှင့်အတူချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီး relaunched ပေါ် ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁။ လ ၁ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၄ အရုပ်သံလိုင်းကဝယ်ယူ Viacom အတွက်စတာလင်ပေါင် ၄၅၀ သန်း(အမေရိကန်ကို$၇၅၉ သန်း)။
ချန်နယ် ၅ ဖြစ်ပါသည်အထွေထွေဖျော်ဖြေရေးရုပ်သံလိုင်းပြသသောနှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းပြန်တမ်းအစဥ္မ်ားကဲ့သို့ ပဉ္စဂီယာ၊ ကြီးမားတဲ့အစ် & နုပညာရှင်ကြီးတွေအစ်ကို၊ အလော၊ ဟိုတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ မဆပ်နိုင်? မွာယူသွား! နှင့် ဂျီဘရောလ်:ဗြိတိန်အတွက်နေရောင် နှင့်နိုင်ငံခြားခင္း။ ၿပီးခဲ့လွန်အောင်မြင်နှင့်အတူမျဖစ္မေနအ မေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွက်အထူးသဖြင့်အပါအဝင်၊ အ သတ္မွတ္ခံ ကိုယ်စားလှယ်၊ အ NCIS ကိုယ်စားလှယ်၊၃ စီးရီးအတွက်အ လုပ်အမိန့်ဂိမ်း၊ ပါဝါကပ္ပတိန်၊ အ Mentalist၊ ခန္ဓာကိုယ်၏အထောက်အထား၊ ကဗ်ာ၊ မႏၲေလး နှင့် အောက်အမိုးခုံး။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်ရုပ်သံလိုင်း ၅ ကြေညာရန်အစီအစဉ်ဖွင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလက်ရုံးနှင့်ခွင့်ပြုဖို့ဖန်တီးပြသများအတွက်အခြားလမ်းကြောင်းအောက်ပါအသစ်မူဝါဒများ၏လက်ထရွန်း။
၃.၁.၁ ချန်နယ် ၅ HD
၃.၁.၂ ချန်နယ် ၅+၁
၈ ၅ စာသား
ချန်နယ် ၅ လွှင့်ကန့်သတ် ခဲ့သည်လိုင်စင်ရအားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအစိုးရအတွက် ၁၉၉၅ ပြီးနောက်တစ်ပြိုင်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့ကြောင်း ၁၉၉၃ ကြာမြင့်တစ်လျှောက်လုံး ၁၉၉၄။ ကနဦးပတ်လ်ာ္၊ပါဝင်သောကွန်ယက်တစ်ခု၏မြို့တော်-ဘူတာရုံအားဖြင့်စီစဉ်ထား သိမ်းရုပ်မြင်သံကြား နှင့်အီတလီနိုင်ငံရေးသမားနှင့်မီဒီယာသူဌေးကြီး ဆီလ် Berlusconi (အဘယ်သူသည်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်အငြိမ်းစားသူ၏ပူဇော်)၊ ပယ်ချခဲ့ပါသည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်အ ဒို စဉ်းစားမအလိုင်စင်မှာအားလုံး။
အခက်အခဲများနှင့်အတူစီမံကိန်းအတွက်အသုံးပြု၏ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သုံးမ်ားခဲ့ကြောင်းတွေကိုခွဲဝေထြက္ရွိရလဒ်ကနေပြည်တွင်း videocassette ပာင္တဲ့။ အောင်မြင်ရန်အမျိုးသားလွှမ်းခြုံ၊ကြီးမားနံပါတ်များမ်ား၏ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း(အုန်းမှာအနီးအနားကြိမ်နှုန်း)အလို့ငှါ retuned သို့မဟုတ်တပ်ဆင်နှင့်အတူစစ်၊မှာလေလံကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ်။
စီမံကိန်းကိုပြန်လည်လယ်တွင် ၁၉၉၄ အခါဒိုပြန်လည်ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ်။ တွမ် McGrath၊ထို့နောက်-များအချိန်မြန်မာနိုင်ငံတကာအသံလွှင့်၊အတူတူထားပြင်ဆင်ထားသောကြိမ်နှုန်းအစီအစဉ်နှင့်အတူ NTL အၾကံေပးအင္ဂ်င္နီယာလစ် Griffiths၊တျလျော့နည်း retuning နှင့်သာအခ်က္ျလွှမ်းခြုံ။ ခင် Hollick၊ထို့နောက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏ မူလွှင့် (နောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်သတင်း&မီဒီယာ၊ကိုယ္ပတ္ပု)ယူထိအဆိုပါစီမံကိန်းအဖြစ်ဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဥပဒေအရတားမြစ်အချိန်မြန်မာမှပိုင်ဆိုင်ပြီးထက် ၂၅%။ ရန်ရုပ်မြင်သံကြား၊အဘယ်သူအားဖြင့်ယခုပိုင်ဆိုင်သောမူရင်းလိုင်စင်ခက္တာသိမ်းရုပ်မြင်သံကြား၊ဒါ့အလာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်။ အခါ McGrath ကျန်ဖြစ်လာမှနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊အချိန်မြန်မာ၏ထွက်ကျဆင်းသွားသောစီမံကိန်းနှင့်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် CLT (လူသိများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက် ရေဒီယိုဘတ်)။ အခြားလ်ာ္ေလိုင်စင်ထည့်သွင်းဝေါလ်(ကဦးဆောင် Canwest နှင့်ရွေးရုပ်သံသောလေလံ£၃၆m များအတွက်လိုင်စင်၊ရာစုသစ္တီ(ပိုင်ဆိုင်အားဖြင့် မနုဿဗေဒ နှင့် Granada အဘယ်သူသည်လေလံ£၂m)ညာ(အားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံ ညာဆက်သွယ်ရေး နှင့် ဆက်စပ်သတင်းစာ အဘယ်သူသည်လေလံ£၂၂m၊အတူတူဖြစ်ရုပ်သံလိုင်း ၅ လွှင့်သူအနိုင်ရလိုင္စင္)
လွေ Olins နှင့် Saatchi&Saatchi အဓိကအတွက်နောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီအကြို-ပစ်လွှတ်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှု:"ကျွန်ုပ်အားပေး ၅"။ ရုပ်သံလိုင်းအဖြစ်လိမ့်မယ်နှစ်ခုလုံးခေတ်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ အလိုဂို(အလြန္"၅"အတွင်းစက်ဝိုင်း)နှင့်အမြင်အာရုံတ္ထု("သကြားလုံးစင္း"ဘား၏အေရာင္မ်ား)အသုံးပြုကြသည်၊နှင့်ကြိုးပမ်းမှုကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ယင္းအစု၏ရုပ်သံလိုင်း ၅ မ်က္ႏွာ;အားဖြင့်နွေဦးရာသီ၏၁၉၉၇၊ဆိုင်းဘုတ်များ ဂျက် Docherty ပြသခဲ့ကြနှင့်အတူ၊အခြားအမည်မသိ။
စီးရီး-ဖွင်ဖန်ခဲ့ကြတွင်ဖော်ပြသောကြိမ်နှုန်းရုပ်သံလိုင်း ၅ စတင်လွှင့်အပေါ်လအတွက်မီဖွင့်လှစ်အဖြစ်၊အပါအဝင်တစ်တွဲများအတွက်ရုပ်သံလိုင်းအချက်အလက်ဖန်။ ပြီးနောက်ပြန်လည်ညှိ၊အများ၏၆၅%ဝန်းကျင်လူဦးရေရဲ့ဗေးနိုင်အမြင်ကိုရုပ်သံလိုင်းပေါ်မှာအဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း၏ပစ်လွှတ်အပေါ်အီစတာတနင်္ဂနွေ(၃၀)၁၉၉၇ တွင် ၆ ညနေအထူးအ မွှေးအကြိုင်မိန်းကလေး သီချင်းဆိုခြင်းတစ်ဦးပြန်လည်ရေးသားဗားရှင်း Manfred မန္းဖန္တီးထိ"၅-၄-၃-၂-၁"အဖြစ်"၁-၂-၃-၄-၅"။ ချက်များနှင့် တိစပျစ်ပင် နှင့် ဂျူ Bradbury စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ငံကိုဗြိတိန်ရဲ့ပဉ္စမ(ဌအပါအဝင် S၄C)ကုန်းရုပ်သံလိုင်းနှင့်အတူထက်ဝက်တစ်နာရီ၏အႀကီးခ်ဲ။
ကြွင်းသောအရာ၏အရုပ်သံလိုင်း ၅ ပစ်လွှတ်ညအချိန်ဇယားနှင့်အတူ၊အရာရှိကြည့်ရှုကိန်းဂဏန်းများသည်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်း:
၆ ညနေ ဒီ ၅! ၂။၄၉
၆။၃၀ ညနေ မိသားစုရေးရာ ၁။၇၀
၇ ညနေ နှစ်အနည်းငယ်ယောက်ျား ၀။၆၈
၈ ညနေ ဆေးရုံ! ၁။၁၂
၉ ညနေ ကျော်လွန်ကြောက်ရွံ့ ၁။၇၀
၁၀:၃၀ ညနေ အဆိုပါဂျက် Docherty ပြသ ၁။၁၆
၁၁:၁၀ ညနေ အဆိုပါဟာသစတိုးထူး ၀။၇၃
၁၁:၄၀ ညနေ Turnstyle ၀။၄၉
၁၂:၁၀ နံနက် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အန္တရာယ် ၀။၀၈
၅:၃၀ နံနက် ငါ့ကို ၅! ၀။၀၃
ယေဘုယျအားဖြင့်၊တစ်ဦးခန့်မှန်း ၂၊၄၉၀၊၀၀၀ ပြီးနားထောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရဲ့ပဉ္စမအခမဲ့ကွန်ယက်ကို၊တစ်ခုထက်ပိုမိုမြင့်မားအောင်အားဖြင့်ပစ်လွှတ်၏ ရုပ်သံလိုင်း ၄၊ဆယ့်နှစ်ခွဲ။
အပေါ်စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၀၂၊ရုပ်သံလိုင်း ၅-ပြန်လည်အမှတ်တံဆိပ်မှငါး၊အတွက်သန်းပေါင်းများစွာပေါင်စီမံကိန်းဖြင့်ညွှန်ကြား Trevor Beattie။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အချိန်၊ဒါဝိဒ် Pullen၊ကပြောပါတယ်:
အပေါ် ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၄၊ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ငါးနှင့် ရုပ်သံလိုင်း ၄ ခဲ့ကြဆွေးနွေးနိုင်တတ်။ ရုပ်သံလိုင်း ၄ နှင့်ငါးကြေညာနိုဝင်ဘာလအတွက်အကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါင်းစည်းအစီအစဉ်ခဲ့ကြ၏။ အစောပိုင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ကောစတင်ပြန်လည်လြှို့ဝှငါး၊၄ ရုပ်သံလိုင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားအသုံးနည်းတတ်ကြသည်။
ရန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် CLT နောက်ပိုင်းတွင်ပေါင်းစည်းလာ ဟုေအုပ်စု ဖြစ်လာခဲ့သူ၏အစိတ်အပိုင်း Bertelsmann နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်များ၊ဝယ်ယူပြီးနောက်ကိုယ္ပတ္ပုရဲ့ ၃၅။၄%ရှယ်ယာအဘို့£၂၄၇။၆ သန်း ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၅။ အဆိုပါဝယ်ယူအတည်ပြုခဲ့ပေါ် ၂၆ ဇွန်လ ၂၀၀၅။ ပြီးနောက် Holleck လာပါဝင်ပတ်သက်သူနဲ့ McGrath ဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင် လယ်သမားများက Dyke (နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုဘီဘီစီ)အဖြစ်အစိုးရဆာင္အကာလအတွင်းလျှောက်လွှာနှင့်အဆင့်အဆိုပါစီမံကိန်း။
အပေါ် ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၅၊ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သောငါးကိုဝယ်ယူခဲ့သောအပိုင်အတွက် DTT'့-အော်၊ ေငြျဖရုပ်သံ။ ခဲ့သည်ဟုအဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်စေနိုင်ပါသည်အသစ်အခမဲ့ပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် DTT၊နှင့်အခြားပလက်ဖောင်း။
အောက်ပါဤငါးတင္ခဲ့နှစ်ခုအသစ်ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံလိုင္းဆောင်းဦးရာသီအတွက်အပေါ် ၂၀၀၆ Freeview၊ မိုဃ်းကောင်းကင် နှင့် အပျိုမီဒီယာ:
၅ ကြယ်ပွင့် စတင်ခဲ့အဖြစ် ငါးအသက်တာ အပေါ် ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆၊ပြဇာတ်၊ရုပ်ရှင်၊ဆပ်ပြာအော်ပရာနှင့်လူကြိုက်အလက်များနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းယခင်ကထုတ်လွှင့်ကြိုကျောင်းရှိုးအောက်ပါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်! အလံ။ ဒါဟာနာမည္ေျပာင္းခဲ့ Fiver ၂၀၀၈၊ ၅* ၂၀၁၁ နောက်ဆုံးမှာတော့၎င်း၏လက်ရှိအမည်ကိုအတွက် ၂၀၁၆။
၅ အက်စ် စတင်အဖြစ် ငါးကျွန်တော်တို့ကို အပေါ် ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆၊ပူဇော်သက္ကာဒရာမာ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊အားကစား၊ဟာသလူပရိုဂရမ်မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ အမည္ေျပာင္း ငါးမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တွင် ၂၀၀၉ ၅ အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် ၂၀၁၁။
ငါးကြီးပေါ်မှာမူအားဖြင့် ရစ်ချတ်မြန္တူးဖန္တီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအုပ်စု မြောက်ပိုင်း&အခွံ ပေါ်တွင် ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁ဝေ£၁၀၃။၅ သန်း။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad nameကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name မြန္တူးျထိပ်တန်းတက်လွှင့်၏စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်အကြောင်း£၁။၅ အုတ္ခံပ်ဥ္ေနောက်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ၊အပါအဝင်အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏£၅၀ ကိုစတာလင်ပေါင် ၁၀၀ အနှစ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ညီမျှ၏£၂၀m မြှင့်တင်ရုပ်သံလိုင်းနှင့်၎င်း၏ပြပွဲအတွက်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်မြောက်ပိုင်းတွင်&အခွံ။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အသိမ်းခဲ့သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်လှုံ့ဆော်အတွက်အခွင့်အလမ်း ဖြတ်ကူး-မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ် ငါးမှမြန္တူးရဲ့သတင်းစာ(နေ့စဉ်အမြန်ရထား နှင့် နေ့စဉ်ကြယ်)နှင့်မဂ္ဂဇင်း(အပါအဝင် အိုကေ!)။ တဋီသတိပေးကြောင်း"စာဖတ်သူတွေလိမ့်မည်အတူဖတ်မှကိုးကားကြသည်။ အခွင့်အလမ်းများအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်-မြှင့်တင်ရေးအကြားသူ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ရုပ်သံချန်နယ်ရှိပါတယ်။"ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အပေါ်သို့ဖြည့်မိမိသိမ်းငါးခုတြင္ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၀၊ရစ်ချတ်မြန္တူးပတ္မွ;"ကျနော်ကြိုက်ရုပ်သံလိုင်း ၅ ငါး၊ဒါပေမယ့်။။။ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်နှင့်အတူအသေးအဖွဲ့ဆွေးနွေးဖို့အဤအမြိုးမြိုးအသေးစိတ်အချက်"။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ထိုနေ့၌ပြီးနောက်၊ရဲ့ နေ့စဉ်ဖော်ပြ သတင်းစာကြောင်းသတိပြုရုပ်သံလိုင်းရဲ့နာမည်ပြောင်း:"ယနေ့မှစ၍အစားဝိုး'ငါး'(ငါးအဘယ်အရာကို? ရက်အပတ်အတွက်? လက်ချောင်း?) သူ့ထံသို့အများကြီးပိုပြီးသိကောင်းစရာများရုပ်သံလိုင်း ၅"။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ၁၁၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လမြန္တူးအတည်ပြုပြန်လည်၏မူရင်းအမည်မှအသုံးပြု ၁၉၉၇-၂၀၀၂။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အပွကြီးပေါ်ရှိထင်ရှားပေါ် ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁။
အထက္တြင္လည်းမြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အကွာအဝေးအသစ်ရေး၏(ယခု-ဖျက်သိမ်း)ညဖျော်ဖြေရေးပြပွဲ အိုကေ!ရုပ်သံ။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad nameကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ပရိသတ်ကိန်းဂဏန်းများအတွက်အထက္တြင္ကြမြှင်နှင့်အတူတိုးမြှင့်ကြည့်ရှုကိန်းဂဏန်းများအတွက်အဓိက ၅ သတင္း စာစောင်နှင့်တိုးတက်လာသောကိန်းဂဏန်းများအဘို့ အိုကေ! ရုပ်သံ အတွက် ၆။၃၀ လဲြပေါက်ကျော်၎င်း၏ယခင် ရာအရပ်မှယိုငါး။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အပေါ် ၁၈ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၁၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ relaunched ကြီးတွေအစ်ကို၊စတင်နှင့်အတူ အနုပညာရှင်ကြီးတွေအစ်ကို ၈ နဲ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ကြီးမားတဲ့အစ် ၁၂၊ဝယ်ဖို့အခွင့်အလေအစီအောက်ပါ၎င်း၏အဖျက်သိမ်းအားဖြင့်ရုပ်သံလိုင်း ၄ ဧပြီလထဲမှာ ၂၀၁၁။ အဆိုပါသဘောတူညီခဲ့တန်ဖိုးရှိအစီရင်ခံ£၂၀၀ သန်း။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ထိုပြသခဲ့သောရုပ်သံလိုင်းရဲ့ကြည့်ရှုကိန်းဂဏန်းများနှင့်အခဲအထများအနည်းငယ်အနှစ်အပေါ်နှစ်ကနေ ၄။၄%ရန် ၄။၅%၊၂၀၁၂။ သာအောင်မြင်ဖြင့်ရုပ်သံလိုင်း ၅ နဲ့ဘီဘီစီတစ်ခုမှာအကြာ ၂၀၁၂ အပေါင်းတို့သည်အခြားကုန်းလွှင့်၌ကျဆင်းမှု့။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အတွက် ၂၀၁၃၊ ဘင် Frow၊အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း၏ဒါရိုက်တာ၏အရေးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားစခန်းလိုဖြစ်ရွေ့လျားအကွာကနေအသံလွှင့်ရုံအမေရိကန်တင္ဩင္းေမိတ်ဆက်ပြသမှကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများကနေဒါ၊အိုင်ယာလန်နှင့်ဩစတြေးလျအချိန်ဇယား။ အဆိုပါစခန်းရှိပါတယ်ကတည်းကစတင်စိဩစတြေးလျအကျဉ်းထောင်ဒရာမာ ကြမ်းတမ်းအကျဉ်းထောင် နှင့်အိုင်း gangland ရီး ချစ်/မုန်း။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ၂၀၁၄၊ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ ရစ်ချတ်မြန္တူး ရှာဖွေနေခဲ့သည်မှာရောင်းချပေးရုပ်သံလိုင်း ၅ အထိအဘို့အပေါင် ၇၀၀ သန်း။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အလားအလာဝယ်လက်ထည့်သွင်း လသမဂ္ဂ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Viacom နှင့်ပူးတွဲကြိုးပမ်းမှုအ နုဿ နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိဆက္ဩယ္ေ။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၁၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊သဘောတူရောင်းဖို့ရုပ်သံလိုင်း ၅ Viacom အတွက်စတာလင်ပေါင် ၄၅၀ သန်း(အမေရိကန်ကို$၇၅၉ သန်း)။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ထိုသဘောတူအတည်ပြုခဲ့ပေါ် ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းကိုပူးတွဲကော်မရှင်အစဥ္မ်ားနှင့်အတူ၎င်း၏ပေးဆောင်ချန်နယ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Nickelodeon နှင့် ချား။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name လမ်းကြောင်းအောက်မှာလည်ပတ်အ Viacom င္ငံတကာမီဒီယာကွန်ရက်များ ဥရောပကုမ္ပဏီခွဲ။ အပေါ် ၁ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၅၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ ရဲ့ငါးကြော်ငြာခြင်းတိုင်းဒေသ:လန်ဒန်က၊ေတာင္/ဟိုလန်နှင့်ဝေလနယ်၊လန်မြောက်ပိုင်း၊စကော့တလန်၊မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အပိတ်ခံခဲ့ရ Viacom နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားသူတို့ကိုငွေရေးကြေး unviable။ ပိတ်သိမ်းကြော်ငြာတိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုရုပ်သံလိုင်း ၅ေကောင်းကင် HD မှပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေကိုလဲလှယ်အတူစံ-ဓိပၸါယ္ဗားရှင်းချန်နယ် ၅ ကိုအပေါ် EPG။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အောက် Viacom၊အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းစီစဉ်တိုးမြှင့်ဖို့၎င်း၏မူရင်းပရိုဂရမ်အုန်းတိုးမြှင့်၊၎င်း၏ဘတ်ဂျက်အားဖြင့် ၁၀%။ ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသသည့်ထိန္အမှတ်တံဆိပ်၊ရည်ရွယ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အသစ်များသို့"၏ဝိညာဉ်တော်ရုပ်သံနှင့်အတူတစ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှလုံးသား"။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ျဗိတိသွ်ေကိမ္စီသာခွင့်ပြုအလေးချန်နယ်အဖြစ်ကူးစက်အလုံးစုံဗြိတိန်၏အသုံးလာ့ဂ္နာကုန်းလွှင့်ထုတ်၊ဒါပေမယ့်ဒိုဖော်ထုတ်သော UHF ချန်နယ် ၃၅ နှင့် ၃၇ နိုင်ပေးလွှမ်းခြုံလှည့်ပတ်၏၇၀%ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏လူဦးရေသည်။ ဤချန်နယ်အသုံးပြုခဲ့ကြသဖြင့်များစွာသောပြည်တွင်းဗီဒီစက္မ်ားအတြက္ထြက္ရွိဆက်သွယ်ဖို့။ မီရုပ်သံလိုင်းနိုင်၊အသံလွှင့်ခဲ့သည္ကျော်-အ-ဖုန္းညွှန်ကြားချက်များသို့မဟုတ်အလည်အပတ်ဆိုသောနေအိမ်မှစောဖြစ်စေ retune ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းသို့မဟုတ်မထိုက်မတန်တစ်ဦးည့္ေလုံးဝပိတ်ဆို့ရုပ်သံလိုင်း ၅ ချက်ပြ။
အပြားများအတွက်လွှင့်ထုတ်၊၃၅ နှင့် ၃၇ ခဲ့ကြ'၏ထွက်အုပ်စု'၊သောရည်ရွယ်သောအိမ်ခေါင်မိုး-ထိပ်ကိုလက်ခံရရှိ နှင့်ဆိုင်သော မဖုံးအုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရုပ်သံလိုင်း ၅ ရဲ့ထုတ်လွှင့်အချန်နယ်။ လူအတော်များများဟာတစ်ခုခုအမကိုခံယူရုပ်သံလိုင်းမှာအားလုံး၊သို့မဟုတ်လိုအပ်သောအသစ်ဟင်။ အသံလွှင့်ခဲ့သည်ထည့်သွင်းလွှင့်ထုတ်တိုးတက်လာဖို့အလာ့ဂ္နာကုန်းလွှမ်းခြုံသောအခြိနျကာလကတည်းက။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းလည်းအပေါ်ပေးထားသောလာ့ဂ္နာ Astra/မနုဿဝန်ဆောင်မှု၊အရာနစ္ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အမည်ဧည့်ခံဒေသများမှလက်ခံရရှိကနေတဆင့်တစ်ဦးဂြိုဟ်တုစလောင်း။
အခြားအလေးလာ့ဂ္နာ ဗြိတိန်ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ်၊အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းဖြစ်နိုင်ဘူးကနေတဆင့်လက်ခံရရှိလာ့ဂ္နာကုန်းလွှင့်အပြားဒေသများရှိ၊အပါအဝင်အချို့သောအစိတ်အပိုင်းတောင်ဘက်ကမ်းလန်၏ဘယ်မှာအချက်ပြလိုမဟုတ်ရင်အတူရောက်စွက်ချက်ပြလှိုင်းမှရုပ်သံလွှင့်ဘူတာရုံတွင်ပြင်သစ်;အများအပြားဒေသများအရှေ့မြောက်အင်္ဂလန်၊အထူးသဖြင့်ပတ်ပတ်လည်အဓိကအ Tyne&တ္ နာမဝိသေသန;အများအပြားဒေသများအတွက်စကော့တလန်;အများဆုံးအတြက္အများစု၏မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ Cumbria။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်၊အားလုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်း(Freesat၊ ကောင်းကင် ဂြိုဟ်တု၊ စာရင်း နှင့် Freeview ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်း၊နှင့်လည်းအများစုဟာကြိုးအာ္ပေ)။ အပေါ်နိုဝင်ဘာလ ၅၂၀၀၈၊အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းစတင်ပေါ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂြိုဟ်တုဝန်ဆောင်မှု Freesat၊ Astra ၂၈။၂ ထဲတွင် ဂြိုဟ်တု။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကိုရီကွန်ယက်ကိုဗြိတိန်အတွက်သုံးစွဲဖို့အမြဲတမ်းအ ပေါ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်ဂရပ်ဖစ်၊သော်လည်းဤအတွက်ဖယ်ရှားစက်တင်ဘာလ ၂၀၀၂။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇ ရုပ်သံလိုင်းရဲ့လိုဂိုဖစ္သည္။
ချန်နယ် ၅ ကိုရရှိနိုင်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အပေါ် Swisscom ရုပ်သံနှင့် Cablecom။
အ လံနိုင်ငံတော်အမှတ်တံဆိပ်၊အခြားဗြိတိန်ကုန်းလမ်းကြောင်း၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ျတွင် ကြိုး သို့မဟုတ် MMDS၊ပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုမှရရှိနိုင်သော။ ၎င်း၏အငွေ့အချက်ပြနိုင်မည်ခံဒေသများအတွက်မန္တလေး မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်၊သို့မဟုတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှအနီးကပ်ဝေလကတည်းကသွားခမဲ့လအပေါ် ၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၈ ပူးပေါင်း Freesat၊ဒါကြောင့်ယခုရရှိနိုင်သောအလံနိုင်ငံတော်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ဂြိုဟ်တုလက်ခံ၊ဒါပေမယ့်မအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ကောင်းကင် EPG၊တစ်လျှောက်နှင့်အတူဂျပန်နိုင်ငံချန်နယ်။
အပေါ် ၃၀ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၉၊အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကိုယာယီရပ်စဲမွာ Freeview ပတ်ပတ်လည်ကနေ ၉:၃၀ နံနက်တိုင်အောင်မွန်း။ ဤခဲ့မှုကြောင့်အပြောင်းအလဲအ Freeview ပလက်ဖောင်းအတွက်တော့ရွေ့လျားရုပ်သံလိုင်း ၅ မှစီးပွား multiplex အ များပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအသံလွှင့် multiplex တိုးမြှင့်ဖို့လွှမ်းခြုံ၏အရုပ်သံလိုင်းမှ ၇၀%၉၉%တိုင်းပြည်အနှံ့ပေါ် လွှင်လွှင့်ထုတ် သာသယ်ဆောင်အသုံး PSB multiplexes ဒါပေမယ့်မသယ်အသုံးဂိုေဒါင္ multiplexes။
ချန်နယ် ၅ HDပြင်ဆင်
အဟောင်းရုပ်သံလိုင်း ၅ HD လိုဂို(၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁ ကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆)
ချန်နယ် ၅ သည္အ ရည္အေ simulcast ၏ရုပ်သံလိုင်း ၅။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းစတင်ပေါ် မိုဃ်းကောင်းကင် ရုပ်သံလိုင်း ၁၇၁ နှင့် အပျိုမီဒီယာ ချန်နယ် ၁၅၀ ဇူလိုင္ ၁၃၂၀၁၀။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad nameကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အတွက်နွေရာသီ ၂၀၁၅၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ နဲ့ ၅ HD ပြောင်းအရပ်၊နှင့်အတူရုပ်သံလိုင်း ၅ HD ခြင်းတွင်တည်ရှိသည်ရုပ်သံလိုင်း ၅ ရဲ့မူရင်းအာကာသ၏ရုပ်သံလိုင်း ၁၀၅။
အပေါ်သို့ပစ်လွှတ်သာအဆပ်ပြာ နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် နေအိမ်နှင့်ဝေး ခဲ့ကြမှာပြထားတဲ့ HD၊နှင့်အတူအက္ခ HD ထဲမှာထည့်ထားမှာထိပ်လက်ျာလက်ကိုထောင့်မျက်နှာပြင်၏။
ချန်နယ် ၅ HD ခဲ့မှုကြောင့်အပေါ်ဖွင့်လှစ် Freeview စဉ်အတွင်း ၂၀၁၀ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးရောက်'ရန်စံသတ်မှတ်'စောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ၂၀၁၁ ရုပ်သံလိုင်း ၅ HD ခဲ့တစ်ဦးတည်းသောလျှောက်ထားများအတွက်ပဉ္စမ-ဓိပၸါယ္ရုပ်သံလိုင်းထိုင် Freeview၊ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူပစ်လွှတ်အတွက်နွေဦးသို့မဟုတ်နွေရာသီအစောပိုင်း ၂၀၁၂။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name တြင္ ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ ကျဆင်းသွား၎င်း၏လေလံယူမှပဉ္စမပေါက်ခံရပြီးနောက်နိုင်ဖြေရှင်းရန်ကိစ္စများ"စီးပွားရေး"။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ရုပ်သံလိုင်း ၅ ပာ"ဖြစ်နေဆဲတိသစ္စာ"မှရှိခြင်း HD ကိုရုပ်သံလိုင်းပေါ်မှာ Freeview အနာဂတ်မှာ။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အောက်တိုဘာလအတွက် ၂၀၁၃၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ HD ဖြစ်လာယူျရုပ်သံလိုင်းတွင်ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တုပလက်ဖောင်း။ ယခင်က၊ဒါဟာရရှိနိုင်အဖြစ် အခမဲ့-ရန်-အမြင်ကို ရုပ်သံလိုင်း၊ဒါပေမယ့်ယခုမှသာရရှိနိုင်သည်ကောင်းကင်'မိသားစုအစုအဝေး'ဖောက်သည်သို့မဟုတ်သူတို့အားသော။
၂၇။ ဧပြီ ၂၀၁၆ ရုပ်သံလိုင်း ၅ HD စမ်းသပ်လွှင့်တင်ပေါ် Freeview Mux။ BBCB(CH၁၀၅)။
၄ စေခြင်းငှါ ၂၀၁၆၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ HD ဖြစ်လာခဲ့သည်ခမဲ့-ရန်-လေ၊coinciding နှင့်အတူ၎င်း၏ပစ်လွှတ်အပေါ် Freeview နှင့် Freesat။
ချန်နယ် ၅+၁ အပေါ်စတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် Freesat၊ Freeview နှင့် ကောင်းကင် အပေါ် ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းလည်းမျှော်လင့်ထားခံရဖို့ကိုကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းတော် ညာမီ ကာလအတွင်း ၂၀၁၂၊ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name နောက်ဆုံးမှာသစ္က ၂၅ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂။ အဖြစ်နှင့်အခြားအလားတူ'+၁'န္ေဆာင္မႈ၊ရုပ်သံလိုင်း ၅+၁ rebroadcasts ရုပ်သံလိုင်း ၅ ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုပရိုဂရမ်အုန်းအပေါ်တစ်နာရီအချိန်နှောင့်နှေးသော်လည်း၊အဆိုပါ'Supercasino'ဂိုေဒါင္ဂိမ္းပိတ်ဆို့သည်ပိုးအပေါ် timeshift။ ထိုရုပ်သံလိုင်း ၅+၁ ရည်ရွယ်သုံးခုလုံး၏ဗြိတိန်ရဲ့လုပ္ငန္း PSB–ရွန်း/STV/UTV၊ရုပ်သံလိုင်း ၄ နဲ့ ၅–ယခုတနာရီ timeshifts။
My၅ ခဲ့တဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုအခြေခံအပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်သံရှိုးဖြစ်ကြောင်းအသံလွှင့်အနှံ့အားလုံး၏အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း ၅။ ဒါဟာမူလကစတင်အဖြစ်ရုပ်သံလိုင်း ၅+၂၄၊၂၄-နာရီ timeshift၏အဓိကအရုပ်သံလိုင်း ၅။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းစတင်ထုတ်လွှင့်အပေါ် ၄ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၄ နှင့်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် Freeview၊Freesat၊မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်အပျိုမီဒီယာ။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကိုအစားထိုး ၅ စတား+၁ အပေါ် Freesat၊မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်အပျိုမီဒီယာ။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းမူလကကြေညာ ၅ အကြာတွင်၊သို့သော်ပြောင်းလဲသွားမကြာမီဖွင့်လှစ်။ ၅ စတား+၁ ပြန်ပေါ် ၁၃၂ ပေါ် Freesat သောရည်ရွယ်ရုပ်သံလိုင်း ၅+၂၄ သို့ပြောင်းရွှေ့ ၁၃၃။
အထိ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊နှစ်ဦးဗားရှင်း၏ရုပ်သံလိုင်း ၅+၂၄ ရာက္လာျ:ညဦးဖောခဲ့ကြောင်းတူညီသောနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်၊ဒါပေမယ့်ဗားရှင်းသယ်ဆောင်ရန် Freeview ခဲ့ဆက္မျ teleshopping တင်ပြအပြင်ဘက်ဖောရပ္ကြက္၊နေတုန်းဗားရှင်းသယ်ဆောင်ရန်ဂြိုဟ်တုနှင့်ကြိုးပွဲကြည့်ပရိသတ်ထို့ teleshopping'ပြတင်းပေါက်'နှင့်အတူတစ်ဦးသုံးနာရီပရိုဂရမ်၊အသံလွှင့်မှာ ၁၀ ၊၄ ညနေနှင့် ၃ နေ့စဉ်နံနက်၊ ဖွဲ့စည်းထားပြိး၏ယခင်နေ့ကရဲ့ရုပ်သံလိုင်း ၅ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် နေအိမ်&အလွ ဖြစ်စဉ်နှင့်အ matinée ရုပ်ရှင်ပြသအပေါ်ချန်နယ် ၅ ကိုယခင်မွန်းလွဲပိုင်း–ဒီအပတ်ပတ်လည်ရဖို့ကန့်သတ်သောပလက်ဖောင်းအာ္ပေနေရာ၏ပမာဏအပေါ်အဆက္မျ teleshopping နိုင်ပါတယ်ကြောင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားမည်-အမျိုးအစား။
၁၀ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၆၊ရုပ်သံလိုင်း ၅+၂၄ နာမည္ေျပာင္းခဲ့ My၅။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းမရှိတော့ ၂၄ နာရီ timeshift၏အရုပ်သံလိုင်း ၅ ဇယားသို့သော်ယခုဖော်ပြ၏မိန့်ခွန်းမှအနှံ့ကွန်ယက်၏အချန်နယ်၊အလားတူ ၄seven။ အကိုတွင်ထဲမှာဆောင်တတ်၏နှင့်အညီရုပ်သံလိုင်း ၅ ရဲ့အွန်လိုင်းဝယ်လိုအားအပေါ်ဝန်ဆောင်မှု၊လည်းခေါ် My၅။ အပေါ် ၁၆ ဇန္နဝါ ၂၀၁၈၊ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်း My၅ မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အစားထိုးအသစ်ရုပ်သံလိုင်း၊၅prime၊ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name နှင့်အတူရုပ်သံလိုင်းဖြင့်ဝေဖန်ကောင်းချီးယံအကြောင်းအရာများနှင့်အသစ်ဖွဲ့ကဲ့သို့သော လျှို့ဝှက်အသက်တာ၏ကုလားအုတ်ငှက် နှင့် အယ Vet Casebook။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သို့သော်၊၃ ဇန္နဝါ ၂၀၁၈၊ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုအပစ်လွှတ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးရှေ့ဆက်သွားသည်အထိအနည်းဆုံးအစောပိုင်းနွေဦးရာသီနှင့်အတူလွှင့်တကယ်ကိုအသစ်ရုပ်သံလိုင်းရဲ့မဟာဗျူဟာ၊နှင့်အလားအလာကိုပြောင်းလဲမည်။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အသစ်ရုပ်သံလိုင်းစတင်ထုတ်လွှင့်အဖြစ် ၅select ၁၃ ဖေဖော်ဝါ ၂၀၁၈။
မူရင်းရုပ်သံလိုင်း ၅ လိုဂို(၃၀ မတ္လ၊၁၉၉၇–၁၆ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၂)
မူရင်းရုပ်သံလိုင်း ၅ လိုဂိုခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်း"၅"အတွင်းစက်ဝိုင်း၊တစ်ခါတစ်ရံအားဖြင့်လိုက်ပါ"စင္း"ငါးရာင္မ်ား(စိတ်ကူးတစ်ခုန်းကျင်ကိုအခြေခံပြီးအရောင်အရက်ဆိုင်များကအသုံးပြုသောရူပါရုံအင်ဂျင်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပုံအုန်း)။ အကြား ၁၉၉၇ နှင့် ၂၀၀၂၊ချန်နယ် ၅ ကိုအသာရန်ကဏ္ဍရုပ်သံလိုင်းမှပြသအ ပေါ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်ဂရပ်ဖစ် (ခွေး)ထိပ်လက်ဝဲလက်ထောင့်။ အပေါ်အချို့သောအစဥ္မ်ားအတွက်ရုပ်သံလိုင်းရဲ့အစောပိုင်းနှစ်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လပ် ၍အ"အဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်"နိမိတ်လက္ခဏာမိတ်အလျားမှခွေးအခါ၊အစီအစဥ္အပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထိုချိုး၊ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့"အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု"လက်မှတ်ထိုး၊အရာထို့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်သို့အခွေး။
အပေါ် ၁၄ ဧပြီ ၁၉၉၇၊Teletext ကြောင်းအစီရင်ခံ ၇၀%ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖမ္းတွေဟာ၏မျက်နှာသာအတွက်ဖယ်ရှား။ ချန်နယ် ၅ ကိုငြင်းဖယ်ရှားသော်လည်းသူတို့လုပ်ခဲ့ပြည်နယ်ပစ်လွှတ်ကတည်းက၊ခွေးခဲ့သည်လည်း။။။။။ ချန်နယ် ၅ ရှင်းပြမိမိတို့အကြောင်းပြချက်များအဘို့အစောင့်ခွေးအပေါ်မျက်နှာပြင်တွင်အပေါ် ၃၀ မတ္လ၊၁၉၉၇၊သူတို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့:ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၁၉၉၉ တွင်ရုပ်သံလိုင်း ၅ စတင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏အသစ်'မိုး'ခေါ်အောင်၊သကြားလုံးစင္းပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုအတွက်အားကောင်းသောသတ္ထုနှင့်ဂရပ်ဖစ်။ ဒါ့အပြင်ပြောင်းလဲ ၂၀၀၀ အခါ၊နောက်ဆုံး ident ထားလာ ၂၀၀၂၊မွတ္အကနေအနားယူ'ရုပ်သံလိုင်း ၅'အမှတ်တံဆိပ်။ နောက်ဖြစ်ဟန်ကြီးပြန်လည် ၂၀၁၁။
ပထမဦးဆုံးအမှုတစ်စုံတစ်လိုဂို(၁၆ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၂–၆ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈)
တွင် ၂၀၀၂၊ချန်နယ် ၅ ကိုယူဆုံးဖြတ်ချက်ချစကားလုံးရုပ်သံလိုင်းမှ၎င်း၏အမည်နှင့်ရည်ညွှန်းအဆိုပါရုပ်သံလိုင်းအဖြစ်'ငါး'။ အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်တြင္ ၁၆ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၂။ အမည်ကို"ငါး"ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်အတွက်အစောပိုင်းဘဝကြေညာချက်များနှင့်ခေါ်သောအနိမ့်မှု'ငါး'သုံးခဲ့တွင်အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကိုထံမှ။
၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၆ သတ္ထုစတင္ခဲ့ပေါ်အခြေခံပြီး၊လေးဘာသာစကားကဲ့သို့သောအဖြစ်မျှော်လင့်ပါတယ်၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်း။ အခေါ်မှာပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့မအင်္ဂါအလိုဂို၊ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name သို့သော်လည်းအခေါ်၍ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထား ၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၇ ထည့်သွင်းရန်ထိုစကားလုံးငါးထပ်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ဒုတိယနှင့်နောက်ဆုံးတစ်စုံတစ်လိုဂို(၆ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈–၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁)
အပေါ် ၆ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈ မွ ၉ နာရီ၊ငါးထုတ်လွှင့်အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်စားထိုး၊အနိမ့်မှု"ငါး"လိုဂိုနှင့်အတူအထက်အမှု"ငါး"။ အ rebrand များကပြုလုပ်ခဲ့သည်။DixonBaxi၊သူတို့ကိုအဆိုအရ၊အသစ်ကြည့်ခဲ့"ပိုပြီးအဆိုရှင်များ၊အသုံးအနှုန်းနှင့်ဖန်တီးမှု။"
ကြည့်ခဲ့လန္းဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၀၉၊အဆိုပါလိုဂိုအထူးကြီး။ အဖြစ်၏အစိတ်အပိုင်းရက္ရွ္၊ထူးခေါ်ခဲ့ကြသည်အလုပ်အတွက်ပြသကဲ့သို့ အ Mentalist၊ ပေါလုသည်နှင်ဥရောပ၌၊အ သတ္မွတ္ခံ:ရာဇဝတ်မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ အလော နှင့် FlashForward။
အဟောင်းရုပ်သံလိုင်း ၅ လိုဂို(၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁–၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၆)
ပြီးနောက်သိမ်းအားဖြင့် ရစ်ချတ်မြန္တူးဖန္တီး မြောက်ပိုင်း&အခွံ၊အဓိကအပြောင်းအလဲနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးမည်ဟုကတိပြုခဲ့ကြသည်အားဖြင့်အသစ်ပိုင်ရှင်၊အတွဲတစ်ကို'ရုပ်သံလိုင်း ၅'moniker။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀၊ထင်ရှားအဆိုပါဘူတာရုံရဲ့အသစ်အကြည့်နှင့်အတည်ပြု၎င်း၏တရားဝင်အသုံးျလ"ရုပ်သံလိုင်း ၅"အတွင်းအနှိပ်ဖွင့်လှစ်။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name မြန္တူးရာထူးအပြောင်းအလဲအတွက်မိမိပဋ္ဋိပက္ခသတင်းစာကို နေ့စဉ်အမြန်ရထား နှင့် နေ့စဉ်ကြယ်ပွင့်။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name ကိုလည်းရှိပါတယ်-မြှင့်တင်ရေးအကြားမြောက်ပိုင်း&အခွံရဲ့သတင်းစာနှင့်မဂ္ဂဇင်းခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များရာထူးတွင်အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း ၅။ အတွက် ၂၀၁၀၊မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အားအပေါ်ရုပ်ရှင်များချန်နယ် ၅ြဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြ။
အဆိုပါအသစ်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ရုပ်သံလိုင်း ၅ အစားထိုးၿပီး"ငါး"လိုဂိုတွင် ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အလိုဂိုက"၅"အနီရောင်စက်ဝိုင်း။ အဆိုပါတိုးချဲ့ဗားရှင်း၏လိုဂိုစကားလုံး"ရုပ်သံလိုင်း"အထက်ဖောင့်၎င်း၏။ ထိုခွေးပြန်လည်အ"၅"တ္ထု၊မူလကတစ်ဦးအဖြစ်ပွင့်လင်း'၅'cutout အတွက်တောက်ပတဲ့အနက္ေရာင္။ ၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၁၊အဆိုပါခွေးကြီးပြင်ဆင်ဖို့အဖြူအဆီ-အၾကည္ေ'၅'အပေါ်မောရာင္။ အဆိုပါခွေးအကြာတွင်ပြန်လာသောအကည္ေ'၅'cutout အတွက်တောက်ပတဲ့အနက္ေရာင္။ အပေါ် ၅ မတ် ၂၀၁၃၊အဆိုပါခွေးအသို့ပြောင်းရွှေ့ကို ၁၆:၉ ဧရိယာဘေးကင်းလုံခြုံ၊အရာတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အချန်နယ်။
အကွာအဝေးအသစ်ခေါ်များအတွက်ရုပ်သံလိုင်း ၅ အနေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁ ထည့်သွင်းပါ"၅"တ္ထုည့္ဒီတိုက်ရိုက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CGI ။ သူတို့အပဲ့အဓိကအနီရောင်အစီအစဉ်၏အရုပ်သံလိုင်းရဲ့သစ်ကော်ပိုရိတ်ပုံရိပ်၊အသီးအသီးတွင်အခြေစိုက်တစ်ဝန်းယိုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အဖြစ်နောက်ခံများအတွက်အရေးယူ။ "ရမ်"အင်္ဂါအရမ်ဆန့်ကျင်နောက်ခံကာတွန်းပုံစံမျိုးနှင့်အတူ"၅"အပေါ်ပေါ်ထွန်းတဲ့မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှ။ "မူလေနရာ"၊"၅"တွင်ပါရှိသောကုထွက်လာမှတစ်ဦး ဂရပ်ဖစ်မူလေနရာ ။ "စိတ်ကူးစိတ်သန်း"တစ်ခုတိုက်ပွဲအကြားဒိုင်နိုဆောကစားစရာနှင့်စက်ရုပ်ပုံနှင့်အတူ"၅"လိုဂိုချမှတ်မှာနီယွန်မီးလုံး(ကွပ်)။ "ပုဂ္ဂိုလ်"အင်္ဂါတစ်ခုမော်ဒယ်လမ်းလျှောက်အပေါ်အနီရောင်ကော်ဇောကနေဖွဲ့စည်းကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းထဲကကင်မရာနွယ်။ "ကားအလိုရှိ"တဲ့ရဲကားလိုက်နောက်ထပ်ကားတစ်စီးလာတဲ့လေယာဉ်ပျက်ကျမှု'ဇရာ'အအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်း၏ဘေးထွက်အပေါ်အရဲကား။ ယေဘုယျ ident နှင့်အတူရုပ်သံလိုင်း ၅ လိုဂို pulsating အပေါ်ဒီယိုမျက်နှာပြင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်ဧပြီလအတွက် ၂၀၁၂။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အပြားအထူးအခေါ်များလည်းအသုံးပြုခဲ့ပြီး ဟိုတယ်စစ်ဆေးရေး၊ လမ်းလျှောက်နေသောလူသေများ၊ ဖြစ်နိုင်?၊ ကြီးမားသောညီအစ်ကို၊ အဘွဲ့၊ ယူရိုပါလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်၊ အ Mentalist၊ Tamara Ecclestone:ဘီ$$မိန်းကလေး၊ ဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့အကြောင်းတွေ၊ ဘယ်လိုယူမှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံတွေ၊နှင့် အလော:ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လည်းအခြေခံပတ်လည်တူညီသောအ၏အဓိကစတူဒီယို။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အစီကိုယ္တိုင္လာေကတ္မ်ားကိုေဖောင့်"Gotham"အတွက်ထက်။ ချိုးလြှံသောအင်္ဂါအ"၅"လိုဂိုတွင်လက်ဝဲ-လက်ထောင့်များ၏မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပုံစံကို၏စက်ဝိုင်းပန္ဟပ္ေထံမှထွက်အရည်အပြောင်းအနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်အရောင်အစီအစဉ်။ အနောက်ဆက်လက်တင်ဆက်ဖို့မီနှင့်ပြီးနောက်အသီးကိုစီးပွား။
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ စတင်ခဲ့ပြီးသစ်တစ်ခုလိုဂိုအနှံ့အားလုံး၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများ—တစ်ဆုပ် ၅ နိုင်သည့်အပြန်အမျိုးမျိုးသောနှင့်အတူဒီဇိုင်းများနှင့်တိရိစ္ဆာန်၊အတွဲအသစ်တစ်ခုစီးရီး"ရုပ်ရှင်"သတ္ထုနှင့်အချိုးလြှံနှင့်အတူစာသားမက်ဆေ့အပေါ်။ အဆိုပါအသစ်အမှတ်တံဆိပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဟာပိုကုန္ခ်င္မွနဲ့"ဖန်တီးမှု"တည်နေရာအတွက်လွှင့်;ဒုတိယသမ္မတ၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးပြီဘေကွန်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအဆိုပြုသည်ဝိညာဉ်တော်ရုပ်သံ၊နှင့်အတူစိတ်ခံစားမှု၊အနေကွဲပြား၊သွက်၊ရောင်စုံနှင့်ဖန်တီးမှုအကြောင်းကြောင်းသိရသည်နောက်ကွယ်ကတွန်းအားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ဗျူဟာချဉ်းကပ်မှု။" ဝေဖန်မှတ်ချက်ပြုမျိုး ၅ ရဲ့လိုဂိုနှင့်သောယှဉ်ပြိုင်၏ကွန်ယက်ကို ရုပ်သံလိုင်းလေး။ သို့သော်၊ဘေကွန်နှိုင်းလေးရှင်းပြသော"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာခွင့်ပြုသန်းပေါင်းများစွာ၏လူအဖို့လက်လှမ်းမတူကွဲပြားဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို။ တစ်ပျြောစိန်ခေါ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အယူခံအားလုံးပရိသတ်တွေ။ အ rebrand ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတကယ်ပြန်အဓာတုပစ္စည်းများ၏အရုပ်သံလိုင်း ၅ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘယ်လိုကြောင့်ရိပ်မိ။" ၅star နှင့် ၅USA လည်းအမွေးအသစ်အမှတ်တံဆိပ်နေစဉ်၊အဖမ်း-တက်ဝန်ဆောင်မှုဝယ်လို ၅ နာမည္ေျပာင္းခဲ့ My၅။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad nameကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရားဝင်ပရိသတ်အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်းများအတွက်ရုပ်သံလိုင်း ၅ င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းက ၁၉၉၇။ ဒေတာအားဖြင့်ထောက်ပံ့ ဒီး။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းတသမတ်တည်းသည်ပဉ္စမမြောက်အများဆုံးကွန်ရက်အတွက်နိုင်ငံအများအားဖြင့်ရိုက်နှက်ခံရခြင်းအားဖြင့်အဓိကပြိုင်ဘက်ဘီဘီစီ၊ဘီဘီစီနှစ်၊ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ရုပ်သံလိုင်း ၄။
ပရိတ်သတ်ခွဲဝေနှင်းတသမတ်တည်းအတွက်ပထမဦးဆုံးခုနစ်နှစ်အသံလွှင့်၊အမြင့်ဆုံးအထိအ ၆။၆%တွင် ၂၀၀၄။ နှစ်နှစ်အကြာတွင်ပရိသတ်ကိုဝေမျှခဲ့တယ်ကျဆင်းသွားဖို့အောက် ၅။၀%။ အတွက် ၂၀၁၂၊ပရိတ်သတ်မျှဝေထ ၄။၅%၊အတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်စဉ်မြင့်တက်များအတွက်ရုပ်သံလိုင်းအတွက်ပရိတ်သတ်မျှဝေကတည်းက ၂၀၀၉။ ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၃၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ overtook ရုပ်သံလိုင်း ၄ ယူသည့်အခါအကောင့်သို့အစည်းအစုရှယ်ယာ၊ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့။ စက်တင်ဘာလ၏အဖြစ် ၂၀၁၃၊အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းပျမ်းမျှ ၄။၀%စုစုပေါင်းပရိတ်သတ်မျှဝေ။
၂၀၁၀ ၄။၅%ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၂၀၁၁ ၄။၄%ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၂၀၁၂ ၄။၅%ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၂၀၁၃ ၄။၁%ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၂၀၁၄ ၄။၀%ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name[./Channel_5_(UK)#cite_note-71 [မှတ်ချက် ၁]]
ချန်နယ် ၅ လုံး၏အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလွှင့်ထုတ္လႊ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းအဓိကလွှင့်ဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အဖြစ်မှန်တီဗီ၊ဂိမ်းပြပွဲနှင့်တင်သွင်းတဲ့အမေရိကန်ဒရာမာ။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်မဖုံးအခြားလွှင့်နှင့်လည်း၊မူရင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းဝန်ဆောင်မှု၊ ၅ သတင္းမ်ား၊အရာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် ITN (ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည် ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၂ အားဖြင့် မိုဃ်းကောင်းကင်သတင္း)။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကြာခဏကပ်လျက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား၊အသားက်ေ နေအိမ်နှင့်ကွာ တွင် ၆ ညနေအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ၅ သတင်း မှာ ၆:၃၀ ညနေနှင့် ကြီးမားညီအစ်ကို နောက်မှာညဦးယံ ၁၀ နာရီ။
အထင်အစဉ်များရုပ်သံလိုင်းအဝင်နံနက်စောစောချက်တင်အစီ အဝီပရိကံ (၉:၁၅ နံနက်)၊အစဥ္မ်ားမွ ၃ ထိပ်တန်းအမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုဒရာမာလုပ်ငန်းများ(သတ္မွတ္ခံ၊ ဥပေဒအမိန့် နှင့် NCIS)နှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဩစတြေးလျဆပ်ပြာအော်ပရာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ (၁:၄၅ )နာရီနှင့် နေအိမ်နှင့်ဝေး (၁:၁၅ )နာရီအသီးအသီး။
နေ့တိုင်း၊သားသမီးရဲ့မိန့်ခွန်းမှာစတင်မှာ ၆ ဖြစ်၏တူ မရှိမဖြစ်လိုအပ်! ဖေါ်ပြ: သောမတ်စ်နှင့်မိတ်ဆွေများ၊ ချစ်စရာဝက်၊ ဖောကင်းလှည့်၊ နှင့်အနည်းငယ်သာအဂၤလန္၊ Nella မင်းသတုံး၊ အနည်းငယ်မင်းသမီး၊ အ Mr။ အမ်ိဳးပြပွဲ၊ လမ်းလုပ် Noddy၊ Fifi နှင့်အ Flowertots၊ Roary အကား၊ Bert နှင့် Ernie၏ကြီးကျောင်း၊ Tickety Toc၊ ငှက်ပျောသီးအတွက် Pyjamas၊ အ WotWots၊ နှင့် Olly အနည်းငယ်ဖြူဗန်။ ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄၊ရုပ်သံလိုင်း ၅ သူတို့ခဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာဝယ်ယူအသံလွှင့်အခွင့်အ NCIS နှင့် သတ္မွတ္ခံ လှည့်ဖျား-လည္ရန္ေ၊ NCIS:နယူး င့္ သတ္မွတ္ခံ:ဆိုက်ဘာ။
အောက်ပါစာရင်းကအများဆုံးဆယ်စောင့်ကြည့်လွှင့်အပေါ်ချန်နယ် ၅ အထိ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ပေါ်အခြေခံပြီး၊တိုက်ရိုက်+၇ ဒေတာဖြင့်ထောက်ပံ့ ဒီး။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၁ ယူရို ၂၀၀၀ ဆန့်ကျင်ဘက်:အင်္ဂလန်နိုင်ငံဖက္ရွင္အပိုလန်
၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၉
၂၈ မတ်လ ၂၀၀၁
၇ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၉
၁၈ ဇွန်လ ၂၀၁၁
၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၀
၇ ဒို ၃:အဆိုပါစက်များ၏မြင့်တက်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၄
၈ အံ့ဖွယ်အပေါ် ၃၄ လမ္း
၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၃
၉ အက်ဖ်အေဖလား ၂၀၀၂/၃:စာဖက္ရွင္အပူးလ်
၁၇ မတ္လ ၂၀၀၉
မှ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၁၁ ရုပ်သံလိုင်း ၅ လည်ပတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လာ့ဂ္နာ teletext ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခြေခံအကွာအဝေး၏အစီစာရင်းများ၊ရုပ်ရှင်အကျဉ်းချုပ်နဲ့အစီအစဉ်လုပ်ထား၏ရုပ်သံလိုင်း ၅။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ခဲ့သည်အားဖြင့် မိုဃ်းကောင်းကင်စာသား နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်ကပေး BigStream လှန်ေနာ္၊ဗြိတိန်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုဆုတ်ခွာခဲ့မှုကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် switchover နှင့်ဆိုင်းအင်တာနက်နှင့်လူမှုမီဒီယာ။
↑ Sweeney, Mark။ "Richard Desmond rebrands Five as Channel 5"၊ London: The Guardian၊ 11 August 2010။
↑ Viacom to buy Channel5for £450m။ BBC News (1 May 2014)။ 1 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Conlan၊ Tara (31 August 2011)။ CSI: Miami helps Channel5cruise past ITV1။ The Guardian။3January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ French၊ Dan (18 March 2009)။ 'CSI' hits series high with 4m။ Digital Spy။3January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ French၊ Dan (1 July 2009)။ 'CSI: Miami' makes record-breaking return။ Digital Spy။3January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Millar၊ Paul (2 April 2012)။ 'Once UponaTime' Channel5premiere enchants 2.2m။ Digital Spy။3January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Millar၊ Paul (27 August 2012)။ 'Once UponaTime' jumps to 1.2m in UK for season one finale။ Digital Spy။3January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Ben (11 January 2012)။ Dana Delany's 'Body of Proof' begins with 1.7m on Channel 5။ Digital Spy။3January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ White၊ Peter (31 July 2014)။ C5 to free production arm to pitch projects to rivals။ Broadcast။ 31 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Berlusconi tenta la carta inglese pronto per l' asta di Channel Five con Mike Bolland tra gli alleati (in Italian)။ Corriere della Sera (28 February 1992)။9August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Berlusconi fa l' Inglese: nel mirino 'Channel 5' (in Italian)။ la Repubblica (28 February 1992)။ 17 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BERLUSCONI rinuncia ancheaChannel5(in Italian)။ la Repubblica (7 May 1992)။ 17 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Channel Five Bidding Closes။ ITN။ 11 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Channel5Give me five (PDF)။ Wold Olins။ 25 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 July 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Channel5(UK) Pre-Launch Promo ။ YouTube။7January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "” (22 November 2008)။ Spice Girls launch Channel5(UK)။ YouTube။ 24 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Channel 5။ DOG Watch!။ Andrew Wiseman's Television Room။ 11 February 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (Press release). Missing or empty |title= (help)Missing or empty |title= (help)
↑ "Five unveils digital TV channels"၊ BBC News၊5June 2006။ 12 October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UK: Media tycoon Desmond seals deal for Five"၊ The Spy Report၊ Media Spy၊ 24 July 2010။ 24 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 July 2010။
ချန်နယ် ၅ ကို အပေါ် Facebook
ချန်နယ် ၅ တွင် တွစ်တာ
SES ရန်လမ်းညွှန်ကိုလက်ခံရရှိ Astra ဂြိုဟ်တု
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Channel_5_(UK)&oldid=495897" မှ ရယူရန်
၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၄:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။